#OromoStruggle – Oduu adda addaa, Bitootessa 4, 2017 – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
On March 4, 2017 By OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORGIn oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org
Dubbiin Lammaa Magarsaa amma ifa tahaa jira. Haasawa isaa hunda keessatti “irratti hojjachuu qabna, irrattis hojjataa jirra” waan jedhu of keessaa hin dhabu. Kun maal agarsiisa? Ummata abdii sobaatiin tasgabbeessaa jiraachuu agarsiisa. Gama biraatiin, gaafii dhimma daangaa ilaalchisee aadde Fariyyaa Aliyyii gaafatteef gomkumaa deebii gaafichaan wal gitu hin deebifne. Aadde Fariyyaan sirriitti rakkoo jiru ibsitee jirti. Akka Oromoo Liyyuu poolisii jalatti qabanii rukuchiisaa jiran “seera isaan hin eegne kan nuti eegnu maali?” jettee gaafattee jirti. Lammaan garuu dhimma daangaa kana akka saaxilamu hin barbaanne fakkaata sababa kanaaf maddi rakkoo akka waan rifarandamii bara 1997 ALH geggeeffameen wal qabsiisee dubbataa jira. Akkasumas rakkoon akkanaa rakkoma duraan ture godheet haasawaa jira. Garuu ragaa qabatamaan kan mullate waraana Wayyaaneetu Liyyuu poolisii waliin Oromoorratti duulaa jira. Dubbiin Lammaa Magarsaa?????? Maaloo ummata kee abdii sobaatiin diina jalatti hin qabin Lammaa!!! Via Ferhan Abdulselam
Wayyaaneen Caffee Oromiyaa Sodaattee jirti
Sababii Miseensii Caffee Oromiyaa tan taate Kabajamoo Aadde #FariyyaaAliyyee walgahii Caffee irrattii Keellaan Godina Harargee Bahaa Magaala Dhangaggoottii Woyyaanneen dhaabbatte Poolisiin Federaalaa UmaataaOromoon Saamaa jiraa kanaaf hatattamaan furmaanni itti jennamu qaba jechuun sodaa tokko malee Fooddaa TV Oromiyaa Tamsaasa kallattii irratti dubbatteef guyyuma kana Sa’atii booda keellaan Harargee Bahaa Magaalaa Dhangaggoo Guutummaan Kaafameera.kun kan ta’eef Onnee Miseensotni Caffee horatan irraa sodaa wayyaanee seeneefi. Kanaaf Ilmaan oromoo hundu iddoo jiru Qabsoo finiinsuu qaba.
Injifannoon Kan OromootiI!!! Via Naf-tanan Gaadullo
JAAL ARAARSO BIQILAA WBO JAARA ABBA GADA WAGA SEENA